I-NOAA ibikezela isizini yesiphepho esebenzayo e-Atlantic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi seziphepho e-Atlantic sizosebenza ngokwengeziwe ngokweNational Oceanic and Atmospheric Administration yase-United States, eyaziwa kangcono njenge-NOAA. Sekukonke, kulindeleke ukuthi bakhe phakathi 12 no-17 iziphepho, lapho phakathi kuka-5 no-8 kungaba yiziphepho, futhi kulezo, ezi-2 kuye kwezi-4 zingaba yiziphepho zesigaba esiphezulu.
Ochwepheshe baphakathi nesizini babuyekeze izibikezelo zabo, futhi bakhombisa ukuthi amathuba okuba yisizini ejwayelekile noma asebenze kakhulu kunokujwayelekile aphezulu kakhulu: 70%.
Esibikezelweni sayo sokuqala, i-NOAA ibilinganise ukuthi kungakha iziphepho eziphakathi kuka-10 no-16, kanye neziphepho ezi-4 kuya kwezi-8, okuyi-1 kuye ku-4 okungabhubhisa kakhulu. Ngakho-ke, izibalo ezintsha ziphakeme kunezinye zezinye izinkathi zonyaka, lapho kwaqoshwa khona iziphepho eziyi-12 kanye neziphepho eziyisithupha, cishe ezi-6 zazo ezivame ukuba sesigabeni esiphezulu.
Ngaphezu kwalokho, kulinganiselwa ukuthi le nkathi yesiphepho, ephela ngoNovemba 30, kube okusebenzayo kakhulu kusukela ngo-2012. Kepha kungani kunamathuba amaningi okuba neziphepho neziphepho eziningi kunokujwayelekile?
Kunezici eziningana ezibhekelwe ukubikezelwa kwazo: into ka-El Niño, esivele ibuthaka, imimoya yokuhweba eziqala ukuba buthakathaka ngaphezu kwe-Atlantic eshisayo emaphakathi, ngaphezu kwe imvula enkulu phezu kweNtshonalanga Afrika.
Noma kunjalo, inhloko yeqembu lesimo sezulu se-NOAA, uGerry Bell, ukusho lokho Amaphethini wokushisa olwandle awathandeki kakhulu ngenkathi ukuthi isebenze ngokweqileNgakho-ke, into yaseLa Niña, engenzeka ezinyangeni ezizayo, ngeke ibe nomthelela omkhulu esikhathini samanje sesiphepho.
Okwamanje, kube neziphepho ezinhlanu eziqanjwe ngamagama, kanye neziphepho ezimbili: u-Alex no-Earl, okudale ukufa kwabantu okungenani abangama-49 eMexico.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » I-NOAA ilindele inkathi yesiphepho esebenzayo e-Atlantic
4 izinganekwane ngokuzamazama komhlaba